301 Views: မှုကိုအရည်ပျော်စေဖို့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသင်၏ YouTube View Count - View2be
22nd ဧပြီလ 2015
သငျသညျယခုခဏ YouTube ကို အသုံးပြု. ခဲ့တာလျှင်, သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသား 301 မှာညပ်အမြင်များနှင့်အတူဗီဒီယိုများကြုံတွေ့ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားဗီဒီယိုလူကြိုက်များကြင်နာ-ဗိုင်းရပ်စ်ဂီတဗီဒီယိုများ, အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စများ, နှင့်တူသော-ရသောလက်ငင်းအကြီးအကျယ်အမြင်များတယ်၏ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သင့်အနေဖြင့်ဗီဒီယိုများ, မှတ်ချက်များကတည်းကအများကြီးအာရုံစိုက်မှု, အကြိုက်များလာပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်နှစ်သက်ရာအဆိုပါ 301 သူတို့ရဲ့ကောင်တာဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှုမြင်နှိုင်းယှဉ်အချိုးအစားမညီမျှမှုဖြစ်ကြောင်းပြောပြနိုင်ပါတယ်။
အခုတော့ဒီမှာပြဿနာမဟုတ်လူတိုင်းကဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းသည်အဘယ်အရာကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအကြောင်းစဉ်းစားပါ။ သင်၏သို့မဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုများ 301 အမြင်များမှာမှီဝဲကြသည်အဘယ်ကြောင့်သင်သိသလား?
အဆိုပါ 301 Views စာနောက်ကွယ်မှလျှို့ဝှက်ချက်
ဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့, လူတို့သည်မိမိတို့ဗီဒီယိုများ 301 အမြင်များကိုရောက်ရှိတစ်ချိန်ကဤမျှလောက်များစွာသောဗီဒီယိုများမှီဝဲတဲ့ကြသည်အဘယ်ကြောင့်မှောင်မိုက်၌ထားရှိမည်ပါပြီ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီနှစ်၏တစ်စုံတစ်ယောက်-Brady ခါရန် Numberphile-ရှိသည်ဟုအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဗီဒီယိုများ 301 မှာမှီဝဲနေကြသည်ကိုဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဤတွင် Brady Ted Hamilton က, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများအတွက် YouTube ရဲ့ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာနှင့်အတူစေ့စေ့စပ်စပ်အင်တာဗျူးပြီးနောက်တက်ရောက်လေပြီဗီဒီယိုရဲ့:
အားလုံးက 300 ရေတွက်နေသည်ရောက်ရှိသည်အထိတစ်ဦးကိုဗီဒီယိုမသက်ဆိုင်သူတို့ဝယ်ယူနေကြသည်မည်သို့, get ရှုမြင်။
300 အမြင်များပြီးနောက် YouTube ကိုအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်နှင့်၎င်း၏အစုကိုစံပေါ်တွင်အခြေခံအမြင်များ၏စစ်မှန်မှုကိုစစ်ဆေးပေးတယ်။ views သော်လည်းကိုယ်တိုင်ရေတွက်ကြသည်မဟုတ်။
အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် YouTube ကိုသုံးကိရိယာအကျိုးဆက်အေးစက်နေတဲ့အမြင်ကောင်တာမှရရှိလာတဲ့အမြင်များ၏မွမ်းမံအတွက်နှောင့်နှေး, ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
အဘယ်ကြောင့် 301 နှင့်မ, 100 သို့မဟုတ် 200 သနည်း ၎င်း၏တန်းတူလျော့နည်း-or--မှကုဒ်များအတွက် YouTube ရဲ့ designated အရေအတွက်ကန့် မှလွဲ. အများကြီးအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး။
မှုကိုအရည်ပျော်စေ YouTube ကို View count များအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သိကောင်းစရာများ
ဒါကြောင့်ယခုကျနော်တို့ထှတျအထိပျထံသို့လာကြ၏။ ဘယ်လိုအတိအကျကျွန်တော်တစ်ဦးအေးခဲ YouTube ကိုအမြင်တန်ပြန်လုပ်ဘူးနောက်တဖန်အပြေး start? အခြေခံအားဖြင့်, သင်သာ options နှစ်ခုရှိသည်:
သူ့ဟာသူ unfreeze ဖို့ကောင်တာအဘို့အစောင့်ပါ။ အများအပြားအချက်များပေါ်တွင် မူတည်. ဒီ နေ့မှစ. တစ်ပါတ်ထက်ပိုမှဘယ်နေရာမှာမဆိုယူနိုငျသညျ။ ဒါကြောင့်စောင့်ဆိုင်းရန် excruciatingly နာကျင်ဖြစ်ပေမဲ့, ဒါကြောင့်လုပ်နေတာအနိုင်နိုင်ဆိုအားထုတ်မှုကြာနှင့်ဆက်ဆက်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူး။
View2.be ကနေ YouTube ကိုအမြင်များကိုရယူပါ။ သငျသညျပိုမြန် unfreeze ရန်သင့်အမြင်တန်ပြန်လိုပါက YouTube ကိုအမြင်များရတဲ့ပိုကောင်း option တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျပကျြစီး၏ 301 အမြင်များထံမှထွက်ရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် YouTube ရဲ့အိမ်မှာစာမျက်နှာပေါ်တွင် featured တဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းတိုးပွါးလိမ့်မည်သာ။ ဒါဟာနောက်ထပ်ပိုပြီးအမြင်များရဖို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၌သင်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်, မှတ်ချက်များ, စာရင်းပေးသွင်းခြင်းများ, ခဲများနှင့်အရောင်း, likes ။ တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရမှာတော့လာပြီအမြင်များသင့်ရဲ့စီးပွားရေး, အထူးသညျသငျ့ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစီမံကိန်းကိုဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးပါမည်။
အတိတ်ကာလ၌, သင်လုပ်နိုင်သမျှသောသင်၏အဗီဒီယိုများယခု 301 အမြင်များမှာအံ့သြစရာမှီဝဲကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုပါက, သင်ကပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ View2.be ကနေအခမဲ့သို့မဟုတ်ပရီမီယံ YouTube ကိုအမြင်များရတဲ့အားဖြင့်သင့်ဗီဒီယိုများကောင်းတဲ့တိုးတက်မှု Give!